के दिमागको केमिकल प्रक्रिया मात्र हो त ‘प्रेम’ ?
काठमाडाैं २९ भदौ ।प्रेमको भावना हाम्रो दिमागका केही केमिकलमा निर्भर हुन्छन् । यस्तोमा धेरैले एउटा प्रश्न गर्ने गरेका छन् कि, समय अनुसार त्यो केमिकल कम हुँदै जाँदा के माया पनि हराउँछ ?
लन्डनकी जो भन्छिन् , “म केही समय अगाडि मात्र गहिरो प्रेममा परेकी हुँ । तर मेरा साथीहरु मलाई माया केबल ‘फेरोमोन्स, डोपमाइन र अक्सिटोसीन’ को मिलावट हो र केही वर्षमै त्यो भावना हराएर जान्छ भन्छन् । र यो कुरा साँचो हुन सक्ने सोचबारे मलाई धेरै डर लाग्छ किनकी यसले सबथोक अर्थहिन तुल्याइदिन्छ । के प्रेम वास्तवमै दिमागको केमेस्ट्री मात्र हो ?
यसरी मायाको साहित्यक विश्लेषणमा पनि मान्छे प्रेममा डुब्ने भनिएको हुन्छ न कि त्यसमा पौडने, प्रेममा पागल भनिएको हुन्छ र पहिलो नजरको प्रेम भनिएको हुन्छ जसको अर्थ मायाले मान्छेको सोचविचार गर्ने र सावधानी अपनाउने गुण मान्दैन । यसकारण पनि प्रेममा पर्दा हामी भावनाको नियन्त्रणमा हुन्छौँ न की भावना हाम्रो र दुनियाँमा सबैतिर परम्परागत रुपमा यो भावनालाई सुन्दर मानिन्छ । यता वैज्ञानिक हिसाबमा भने यो हाम्रो शरीर भित्र उत्पादन हुने हर्मोनहरुको जटिल मिसावट मात्र हो भनिएको छ ।
उदाहरणका लागि फेरोमोन्स हर्मोनले नै अर्को प्राणीप्रति आकर्षित हुनमा मुख्य भूमिका खेल्ने बताइन्छ । तर यो हर्मोन मान्छेमा हुन्छ भन्ने एकदम कम प्रमाण छ । त्यस्तै मेलमिलापको हर्मोन भनेर चिनिने, ‘न्युरोपेप्टाइड अक्सिनोसिन’बारे पनि धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएको छ । यसले जीवजन्तुहरुमा अक्सिटोसिनको उत्पादन रोकिएमा मिलापको भावना पनि अवरुद्ध हुन्छ । तर मान्छे मान्छेबीचको सम्बन्धमा भने अक्सिटोसिनको धेरै महत्व नहुने बताइएको छ । यसरी विज्ञानका अनुरुप व्यक्ति व्यक्तिबीचको प्रेम र भौतिक वस्तुहरुप्रतिको मोह जस्तै मनपर्ने फुटबल टिमप्रतिको हाम्रो लगाव उस्तै हुन्छन् ।
त्यस्तै प्रेमबारे निर्णय लिनुपर्दा मान्छेले जीवनका अति महत्वपूर्ण निर्णय समान बौद्धिक रुपमा सोचेको हुँदैन हामीले त्यसमा केबल सहज व्यवहारिक ज्ञानको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । यसरी मान्छेले प्रेमको भावनालाई केबल आफ्नो हितका लागि मात्र अपनाउँछ जसमा अरुका बारेमा सोच्ने कुरा आउँदैन । विज्ञानको भाषामा, आफूलाई सबैभन्दा प्रिय कुरा प्राप्त गर्ने तरिका अरुले प्रयोग गरि आफ्नो कुरा चोर्न सक्ने डरका कारण पनि पनि मान्छेले खुलस्त रुपमा मायाको भावना अरुलाई बुझाउन चाहँदैन । जुन हाम्रो परम्परा र संस्कृतिमा समेत लागू हुन्छ ।
तापनि प्रेम विज्ञानले साचेजति सजिलो विषय भने होइन । किनकी यो भावना कुनै एउटा सुइ लगाएर उत्पन्न गराउन वा गायब पारिदिन सकिँदैन । जीवविज्ञानको तर्कले पनि यसको सही विश्लेषण असम्भव पारिदिन्छ । त्यसैले मायाप्रेम जटिल नभएको भए मान्छेले अहिलेको जति क्रान्ति नै गर्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसैले पनि प्रेमलाई केबल दिमागको केमिकल प्रक्रिया भन्न सकिँदैन । बीबीसी
अमेरिकाको यो शहरमा छैन मोबाइल, वाईफाई र रेडियो : कस्तो होला जनजीवन ?
नेपाल आइडल–३ फस्ट रनरअप प्रविन बेडवालको नबोली नबोली गीत सार्वजनिक
शुल्क नतिरेको भन्दै विद्यालयका प्रिन्सिपलबाट अभिभावक कुटिए
अनलाइन फुड डेलिभरी गर्दै इटहरी डेलिभरी सर्भिस
जिल्ला प्रशासन कार्यलय कैलालीमा सेवाग्रहीको भिडभाड, कोरोनाको उच्च जोखिम
सुदूरपश्चिममा वैज्ञानिक वनका नाममा चरम अनियमितता, वातावरणीय जोखिम भएको ठहर
बझाङमा १२ बर्षिया बालिकालाई बलात्कार पछि हत्या
कैलालीका एक हजार ६ सय थपले जिते कोरोना
नेपालमा लम्बियो मनसुन
डा.केसीको अनसनमा धनगढीबाट पनि ऐक्यवद्धता